Heshiisyo ay kala saxiixdeen beelo ku dagaalamay deegaanno ka tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose – Radio Muqdisho
Heshiisyo ay kala saxiixdeen beelo ku dagaalamay deegaanno ka tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose
Madaxweynaha Koofurgalbeed ee Soomaaliya ayaa soo xiray shirka dib-uheshiisiinta dhinacyadii ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo degmada Afgooye lagu soo geb agebeyeey.
Shirka oo ku saabsanaa sidii xal looga gaari lahaa maleeshiyo beeleedyo ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, ayaa waxaa ka qeyb galay Culimaa’udiin, odoyaal dhaqameed, waxgarad, aqoonyahanno, haween, dhalinyarro iyo marti sharaf kale oo kulanka lagu casuumay.
Wasiirka Dib-u-heshiisiinta ee Maamulka Koonfurgalbeed ee dalka Cabdiqaadir Nuur Carraale oo shirka ka akhriyay qodobada lagu heshiiyay ayaa sheegay in ay ka koobanyihiin 9 qodob, isagoo ka codsaday dhinacyadii horey colaadda u dhexmartay inay fuliyaan qodobada lagu heshiiyay.
Qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah
In ciddi jebisa heshiiskan lagu qaadi doono xeer ciqaabeedka u degsan Soomaalida iyo kan dowliga ahba.
In goobihii lagu dagaalamay la geeyo ciidamado isku dhaf ah oo isugu jira boolis iyo Nabad sugid.
In tababaro iyo dhaqan celin loo sameeyo maleeshiyaadka hubeysan ee gobolka ku sugan.
In saldhigyada ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka loo cayimo goobo ka baxsan meelaha rayidka.
In gar gaar beni’aadanimo loo fidiyo, loona sameeyo barnaamijyo dib u dejin ah dadkii ku barakacay colaadda.
Baarlamaanka oo ka doodaya hindise sharciyeedka Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka
Wasiirada Cusub oo munaasanad lagu taageerayo lagu qabtay Muqdisho